“Cheena Harayeko Manche” book review – nepali bytes
“Cheena Harayeko Manche” book review
January 3, 2014 March 20, 2016 nepali bytes	Comments
आत्मकथा लेख्दा लेखक इमानदार हुन पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न सर्वव्यापी रहिआएको छ । जीवनका केही रहस्य आफैसँग राख्नुपर्ने वाध्यता भएपनि लेखक इमानदार नभए उनको मनले पुस्तकलाई ‘आत्मकथा’ भन्न नदेला । यी वाध्यताबाबजुद, इमानदारीतासँगै पुस्तकमा लेखकको विचारधारा पनि देखिनुपर्छ जुन अन्तरमनबाट उकुसमुकस भएर पोखिएको होस् । यति भएन भने त्यो पुस्तक आत्मकथा नभएर ‘अर्कैकथा’ हुन के बेर ?
अभिनयका सम्पूर्ण खुड्कीलाहरू पार गरेर लेखकको दज्र्यानी चिन्ह हासिल गर्दै हरिवंश आचार्य ‘चिना हराएको मान्छे’ पुस्तक सहित देखिएका छन् । यस आत्मकथामा उनका जीवनवर्णनहरू पढ्दा लाग्छ, इमानदारीपूर्ण ढङ्गमा प्रस्तुत भएर हरिवंशले आत्मकथा लेखक हुनुको धर्म पूरापूर निभाएका छन् ।
राष्ट्रको बहुचर्चित कलाकारले के खाला, के लगाउला, कस्तो सपना देख्ला– आम मानिसलाई जिज्ञासा लागिरहन्छ । पाठकलाई आचार्यले दिएको यो कोसेलीले ती सबै जिज्ञासा पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ । पढिसकेपछि मानिसलाई लाग्नेछ, हरिवंश आचार्य एउटा खुला किताब हुन् जसलाई सबैले सजिलै पढेर बुझ्न सक्छन् । उनी पनि सामान्य मानिसले झैँ खान्छन्, बोल्छन्, सोँच्छन् र सपना पनि देख्छन् । रमाइलो बाल्यकालको विवरणसहित सुरु भएको पुस्तक पढ्दा पाठकलाई हरिवंश तिनकै अगाडि सशरीर उपस्थित भै टेपरेकर्डले झैँ आफ्ना संघर्षपूर्ण जीवनकहानी बकिरहेको जस्तै लाग्छ । फरकफरक प्रसंगअनुसार ५३ ओटा अध्यायमा बाँडिएको किताबमा हरिवंशको जन्म, चकचके बानी, पारिवारिक झमेला, बैंशालु दिनका मनोभाव, कलाकारिता यात्रा र त्यसको निरन्तरता, राजपरिवारसँगको भेटघाट, विदेश यात्रा, पत्नीवियोगमा कुँडीएको मन र पुनर्विवाह आदि गरी गम्भीर तथा रमाइला कुराहरू छन् ।
हरिवंशको जीवन किस्साहरू पढ्दा पाठक रुँदारुँदै हाँस्छन् र हाँस्दाहाँस्दै रुन्छन् पनि । यो आत्मकथा एउटा टुहुरो केटोको कथा हो, चञ्चले युवाको कथा हो, देशको प्रतिष्ठित कलाकारको कथा हो, मुलुकका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय एउटा देशभक्तको कथा हो जसले देशलाई गुन लगाएको छ । पत्नीबियोगमा संघर्ष र दुख्खसँग जबरजस्त लाप्पा खेलेको एउटा दुखी अधबैँशेको कथा हो र मुर्झाएर फेरि तंग्रिएको पतिको कथा पनि हो ।
काभ्रे जिल्ला पुख्र्यौली घर भएका हरिवंश काठमाण्डौँमा जन्मन, हुर्कन, पढ्न, लेख्न र संघर्ष गर्न पाए र देशको ठूला कलाकार भए । जनताले तिरिनसक्नु गुन लगाए । जीवनमा उनले गरेका संघर्षहरू देख्दा लाग्छ उनी चरम संघर्ष गर्न सक्ने मानवका अनुपम नमुना हुन्, भन्छन्, ‘थाहा छैन, जिन्दगीमा अझ कति दुख्ख र सुख्ख पाउनु छ । म चिना हराएको मान्छे !’ सानै हुँदा बाआमा स्वर्गे भएपछि दिदीहरूसँगै हुर्कीए उनी । बाआमाको काखमा लडिबुडी गर्न नपाउँदा बच्चा पक्कै पनि उग्र हुन्छ, बढी स्वतन्त्र भएको अनुभव गर्छ । तर उमेर हुँदै गएपछि पिरलोहरूले थिचिएको महसुस गर्छ । हरिवंशलाई पनि त्यस्तै हुनुथियो, भयो ।
उल्लिखित सुख र दुखका किस्साले पुस्तकलाई कहिँकतै पट्यारलाग्दो बनाएका छैनन् । एसएलसी परिक्षा दिँदा उनको संघर्ष, भारत भ्रमण गर्दाको प्रसंग, गाइजात्रे महोत्सवमा सहभागिताका कथाले पेट मिचिमिची हँसाउँछन् भने पत्नी मीरा बिरामी हुन थालेपछि उनले झेलेको मानसिक तनाव र उनको मृत्युपछिको अवस्था वर्णन पढ्दा पाठकका आँखाका डील आँसुले टम्म भरिन्छन् ।
साढेतीन दशकयताका पार्टनर मदनकृष्णलाई दिल खोलेरै असली प्रतिद्वन्द्वी भन्न सकेका छन् उनले । यो उनको इमानदारीताको चरम बिन्दु हो । राष्ट्रबैंकको एउटा कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै प्रतिभा देखाउन गएका दुई प्रतिद्वन्द्वी केही बेरमै जीवनभरका सहकर्मी हुन्छन् । हरिवंशले आफू सहि समयमा जन्मिएको बताउँदै आफ्ना अघिल्ला पुस्ता, आफूसँगैका पुस्ता र आफूपछिका पुस्तासँग कसरी सँगै काम गरिरहेका छन् त्यसको लेखाजोखा पनि राखेका छन् । सारा नेपालीलाई आफन्त ठान्दै सबै कुरा छर्लङ्ग भनेका छन्, केही लुकाएका जस्तो लाग्दैनन् । एउटा परिवारले ढोका थुनेर गर्नुपर्ने वार्तालाप पनि उनले सबैलाई सुनाएका छन् ।
राजनीतिक प्रसंग लम्बेतान भएजस्तो लागेपनि धेरैजसो रमाइलै छन् । भारतबारे उनले दिएको कडा प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक छ, भन्छन्, “भारतको कुनै मुख्यमन्त्रीले दिल्ली हल्लाउन सक्छ तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डौँ पनि हल्लाउन सक्दैन ।” देशका प्रत्येक आन्दोलनहरूका साक्षी र सहभागी हरिवंशले देशले भोगेको भूत र वर्तमानको सहि वृत्तान्त दिएका छन् । राष्ट्रप्रेमी र इमानदार नागरिकलाई लागेका उकुसमुकुस पोख्ने गतिलो मञ्च पनि सावित भएको छ यो पुस्तक हरिवंशलाई ।
आत्मकथा नितान्त नीजि भएपनि उनले व्यक्तिगतबाहेकका आफ्ना कर्मक्षेत्रसँग गाँसिएका प्रसंगहरूमा ‘म’ होइन ‘हामी’ भएर प्रस्तुत भएका छन्, र धेरै ठाउँमा लाग्छ यो ‘मह’ जोडीको आत्मकथा हो । आफ्नो जोडीलाई गरेको श्रद्धाको चरमबिन्दु मान्नुपर्छ यसलाई । देश बनाउन हरकालमा लागिपरेका यिनले राष्ट्रपतिको हातबाट ‘मह’लाई राष्ट्रिय सम्मानको आस गरेका छन्, जुन आफैमा उचित पनि छ ।
आकर्षक कभरको अघिल्लो भागमा हरिवंश एउटा सामान्य मानिस देखिन्छन् भने त्यसको पछिल्लो भागमा उनको कर्मक्षेत्रको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ । पुस्तकका अध्यायहरू आफैमा स्वतन्त्र छन् । तिनलाई तासझैँ फिटेर पढे पनि असहज महसुस हुँदैन । भाषागत रूपमा सामान्य लाग्ने यो पुस्तक देशको प्रतिष्ठित कलाकारको वास्तविक पाण्डुचित्र हो । यस्ता कलाकारबारे जान्ने चाह धेरैले गरिरहेका हुन्छन् । पुस्तकले ती मानिसको जिज्ञासाभाव मेटाउन सहयोग गर्दै पाठकहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएर पठन संस्कृतिलाई उच्च बनाउन मद्दतकारी ठहरिन पनि सक्छ । पुस्तकको बाहिरी र भित्री कलेवर, प्रस्तुती र शैली आकर्षक छन् । तर दर्जनौँ ठाउँमा भएका साना–मसिना भाषिक त्रुटीहरू गाँसमा ढुङ्गा बनेर दोहोरिरहन्छन् । पुस्तकले पस्केको खाना मीठो छ तर भाषिक त्रुटीको रूपमा दाँतमा बारम्बार मसिना ढुङ्गा बजारिन आउँछन् । यसले एउटा प्रश्न जन्माउँछ, हामीले त्रुटीरहित पुस्तक कहिले पाउने ? जेहोस्, देशले पाएको सच्चा र प्रतिभाशाली कलाकारको इमानदारीतापूर्ण बयानको रूपमा यो पुस्तकले पाठकको मन सजिलै कब्जा गर्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।
Book review by CP Aryal (सिपी अर्याल).
Image source: Ajit Baral’s Twitter page
Cheena Harayeko Manchhe Cheena Harayeko Manchhe Hari Bhansa Acharya Fine Print publications
Nepal Children’s Art Museum invokes creativity and self expression
Durga Prasad Shrestha to receive 17th Parasmani Puraskar on Jan 26